Planet Mubairo 2021: yakanyanya kujairika uye isina kujairika munhoroondo dzese | Zvazvino Zvinyorwa
Planet Prize 2021: yakanyanya kujairika uye isina kujairika munhoroondo dzese
John Ortiz | | dzakawanda
Kubva pakati pegungwa hombe remazita e654, iyo 2021 Planet Prize jury yakasarudza iyo thriller histori Moto guta - NaSergio López (zita rekunyepedzera) - sebasa rinokunda remamirioni euros yemakumi manomwe edhisheni yemakwikwi ane mukurumbira. Iyo novel yaive yekupedzisira yaive Vana vehasha - Yuri Zhivago (pseudonym) - uye mubairo wake mari yaive mazana maviri ezviuru euros.
Iyo National Art Museum yeCatalonia yakashanda senzvimbo - nemadzimambo eSpain sezvapupu - zvemanheru asina kujairika emhemberero, iyo isina kujairika munhoroondo yayo. Mubairo wePlanet 2021 hauna kungohwinwa chete nemukadzi asipo, asi izvi, futi, zvakaverengerwa nevarume vatatu. Uye sekunge izvi zvaive zvisina kukwana, mumaawa asati aunzwa, mubairo wemakwikwi wakabva pa601.000 kusvika pa1 miriyoni emadhora, zvinoita kuti ive mukwikwidzi wemabhuku akapfuma kwazvo munhoroondo - kurova Mubayiro weNobel nemazana zviuru gumi.
1 Vakahwina: Pfungwa Dziri Kunze Kuteedzera Munyori Carmen Mola
2 Pamusoro pevanyori vakasika Carmen Mola
3 Anokunda zvakafanana mukupedzisira
4 Iyo jury yeiyo 70th edition yeiyo Planeta Prize
5 Makakatanwa munyika yezvinyorwa zvevakadzi kusati kwaziviswa kwekuzivikanwa kwaCarmen Mola
Vakahwina: Pfungwa Dziri Kunze Kuteedzera Munyori Carmen Mola
Kwemakore mana ikozvino, zita raCarmen Mola raive richinzwika - uye richiri kuenderera - mune nyika yekunyora. Uye hazvisi zvishoma, Yakanga iri yemunyori uyo anga asarudza kuramba asingazivikanwe kunyangwe akatengesa anopfuura mazana mana emazana emakopi ne trilogy yake Mwenga wechiGypsy. Nekudaro, zvese zvakavanzika zvinosvika kumagumo, uye kana mhedzisiro iyi ichibva muruoko rwekunaka wepasi rose manomwe-mubairo, saka gamuchira.
Zvinogona kutaurwa, ipapo, kuti aya mazwi aCarmen Mola mubvunzurudzo yemibvunzo aive echiporofita:Ini handina chikonzero chekuda kuratidza hunhu hwangu, kunyangwe tichigona kugara tichiisa zero yekuwedzera pane cheki; Zvirinani ndisambofunga nezve mukana uyu ”. Chikonzero chakauya ...
Uye kana: kuendesa Planet Mubairo 2021 chaive chikonzero chakakwana cheimwe yeanonyanya kunyora enigmas gumi apfuura kuti abude pachena. Shure kwaSergio López (pseudonym) uye wake de Moto guta, aive chinyoreso chaCarmen Mola, uye seri kweunyanzvi hwake - kukwanisa kuwana mubairo nemari- pfungwa dzaAntonio Mercero, Jorge Díaz naAgustín Martínez.
Uye zvakanaka, ikozvino iwe unonzwisisa nei mune imwe bvunzurudzo kuburikidza neemail, Mola akanyora: "Ndinobvuma kuti ndakanyepa nezve zvese zvinhu." Aifanira kunge akateerera.
Pamusoro pevanyori vakasika Carmen Mola
Kuunzwa kwemubairo uyu hakusi kungoerekana kwaitika, uye zvakare kubudirira kwakawanikwa nemunyori wenhema mukati memakore mana ekuvapo. Heino pfupiso yemabasa ekunyora evanyori vanohwina mubairo:
Iye munyori ane basa rakareba - mukuru pane vatatu -, kunaani ari enganonyorwa dzakadai se Kururamisira kwevanodzungaira (2012) y Ndine mandiri zviroto zvese zvepasi (2017). Díaz akamirawo semunyori wenyaya yeterevhizheni.
Mumazera, iye ari pakati pevatatu vevakagadzira. Zvakare munyori wenhau, mabasa avo anobuda pachena Hupenyu husina hanya (2014) uye Nyaya yevakafa vakadzi vechiJapan (2018). Saizvozvowo, munyori akanakisa munyika yevanoseka nemusoro wake Violet (2018).
Ndiye gotwe muboka, kwete ane tarenda mashoma. Kuwedzera pakuve munyori wenhau - Nemabasa akadai se Gomo rakarasika (2015) -, Iye munyori wezvinyorwa akateedzana, pakati pazvo shingairira kubudirira Pasina marobhu hapana paradhiso.
Anokunda zvakafanana mukupedzisira
Paloma Sánchez-Garnica (1962) akahwina chinzvimbo chekupedzisira ne Mazuva ekupedzisira muBerlin, izvo yakatumidzwa ine zita Vana vehasha pasi pemanyepo Yuri Zhivago. Icho chakakodzera kukosheswa, zvese zvebasa rayo rakakura, uye nehunhu hwenzvimbo dzayo uye marongero. Mabasa akadai se:
Iyo huru arcanum (2006)
Mhepo yekumabvazuva (2009)
Mweya wematombo (2010)
Maronda matatu (2012)
Sonata yekunyarara (2014)
Ndangariro yangu yakasimba kudarika kukanganwa kwako (2016, Fernando Lara mubairo wegore rimwe chete)
Kufungira kwaSofia (2019)
Iyo jury yeiyo 70th edition yeiyo Planeta Prize
Dare redzimhosva rine mukurumbira rakasarudza vakahwina mumakwikwi rakagadzirwa ne:
Belén López (mupepeti wedhairekita wePlaneta)
José Manuel Blecua (wechiSpanish philologist uye mudzidzi)
Carmen Posadas (munyori)
Rosa Regàs (munyori)
Fernando Delgado (munyori)
Juan Eslava (munyori)
Pere Gimferrer (munyori)
Makakatanwa munyika yezvinyorwa zvevakadzi kusati kwaziviswa kwekuzivikanwa kwaCarmen Mola
Sezvakambotaurwa, Carmen Mola anga ave munhu anonamata mumakore achangopfuura mukati me nyika ye thriller ChiSpanish chinyorwa. Uku ndiko kwaive kukanganisa kwake, zvekuti musangano wechikadzi wakamusimudzira semunhu, muenzaniso unoshamisa wemuenzaniso wekutevera. Sangano reVakadzi rakanga ratowedzera basa raro pachikamu charo che "kuverenga kwechikadzi", nzvimbo yainogovana - kana kugovana - nevanyori vehunhu hwaIrene Vallejo naMargaret Atwood.
Nekudaro, uye nezvikonzero zvekuregerera, mushure mekuzivisa kuzivikanwa chaiko kwemunhu wekunyepedzera, iyo icon yakawira kune vamiriri vazhinji vevakadzi veSpanish. Panyaya iyi, Beatriz Gimeno -munyori, mukadzi uye panguva iyoyo akabata chinzvimbo chemukuru weWomen's Institute- akaburitsa paprofile yake yeTwitter: Haisi iro zita chete, ihwo humiriri hwenhema hwaakatora nevaverengi nevatori venhau. Matsotsi ”.
Kune rumwe rutivi, chitoro cheMadrilenian Mujeres & Compañía Iye akati: "Mupiro wedu kuCarmen Mola hashtag, asi ndiMola kupfuura vanhurume vasingazvigare zvese. #CarmenMola ”. Ipapo: vakabvisa makopi ese ebasa remunyori wenhema mumasherufu avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Planet Prize 2021: yakanyanya kujairika uye isina kujairika munhoroondo dzese